क्यानको कारबाहीले क्रिकेट टिममा हलचल, ज्ञानेन्द्र आउट सन्दिप बने नयाँ कप्तान - BishwaGhatana
क्यानले हिजो ज्ञानेन्द्रलाई कप्तानबाट हटाउँदै सन्दिप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान नियुक्त गरेको थियो । नयाँ कप्तान बनेका सन्दिपले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अरूबेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पोष्ट गरिरहने उनले क्यानको निर्णय’bout भने अर्थपूर्ण मौनता साँधेका छन् । क्यानको निर्णय आएपछि सन्दिपको फेसबुक खाता नै डिएक्टिभ गरिएको छ । ट्विटर र इन्स्टामा पनि उनले केही लेखेका छैनन् ।
त्यस्तै, कारबाहीमा परेका चार खेलाडीबाट पनि कुनै औपचारिक भनाइ सार्वजनिक भएको छैन । पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल हिजोदेखि नै मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसेका छन् । स्वीच अफ नगरेकाहरु पनि बोल्न चाहँदैनन् ।
बरु क्यानकै केही बोर्ड सदस्यले भने कारबाहीप्रति सार्वजनिकरुपमा असहमति व्यक्त गरेका छन् । बोर्ड बैठकमा समेत ६ जना सदस्यहरुले निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । उनीहरुको असहमतिका बाबजुद बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको थियो ।
केही क्रिकेट खेलाडीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले क्यानको निर्णय सेयर गर्दै फेसबुकमा ‘आइ एम डन’ (मलाई पुग्यो) भन्दै सन्देश पोष्ट गरेका छन् । राष्ट्रिय टिमका क्रिकेटरहरु करण केसी, कुशल भुर्तेल, आरिफ सेख, इशान पाण्डेलगायतले यस्तो पोष्ट गरेका हुन् ।
यसैगरी सोमपाल कामीले आफ्ना असन्तुष्टि जनाउन कालो ब्याकग्राउन्ड पोष्ट गरेका छन् । पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र पूर्वउपकप्तान दिपेन्द्र ऐरीले भने सामाजिक सञ्जालमा केही पनि लेखेका छैनन् ।
क्यानले नयाँ कप्तान नियुक्त गरेका सन्दिप लामिछानेसँग अन्य खेलाडीहरुको ‘कोल्ड वार’ देखिएको छ । पूर्वकप्तान पारस खड्का समेतले फेसबुकमा सन्दिपप्रति छेडखानी गरेका छन् ।
इन्स्टामा सन्दिपलाई केही खेलाडीहरुले अनफलो गरेको पाइएको छ । सन्दीपलाई इन्स्टामा पारससहित ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्रसिंह ऐरी र सोमपाल कामीले समेत अनफलो गरेका हुन् । सन्दिपले उनीहरुलाई फलो गरेका छन् । ट्विटरमा भने सन्दिप र पारसले एक–अर्कालाई फलो गरेका छन् । केही समयअघि ट्विटरमा सन्दिपले पारसलाई अनफलो गर्दा हंगामा भएको थियो ।
आज बिहान पारसले फेसबुकमा एउटा पोष्ट गरेका थिए, जसलाई सन्दिपप्रति लक्षित ठानेर समर्थकहरुले आलोचनासमेत गरे । त्यसपछि उनले सो पोष्ट हटाएका छन् । उक्त पोष्टमा इन्स्टामा कसरी लाइक्स बढाउने र लोकप्रियता पाउने भन्ने टिप्स उल्लेख थियो ।
पारस भन्छन्– अहिले बोल्दिनँ
खेलाडीहरुमाथिको कारबाहीलाई लिएर हामीले पूर्वकप्तान पारस खड्कासँग प्रतिक्रिया मागेका थियौं । उनले अहिले आफूले बोल्नु हतारो हुने बताए ।
‘यो विषयमा खेलाडीहरु नै अगाडि आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मैले अगाडि बोल्दा अनेक अर्थ लगाएर व्याख्या गरिन्छ ।’ उनले खेलाडी र क्यानबीच सौहार्दता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सन्दिपको कप्तानी अस्वीकार्य ?
खेलाडीहरुको पछिल्लो रवैयाले उनीहरु सन्दिपलाई कप्तान स्वीकार्न तयार नरहेको झल्किन्छ । सन्दिपभन्दा सिनियर धेरै खेलाडीहरु टिममा रहेकाले उनलाई स्वीकार्न कठिन भएको हो ।
क्यान स्रोतका अनुसार हिजोको बैठक अगाडि नै सन्दिपलाई नयाँ कप्तान बनाउने गरी चाँजोपाँचो मिलाइएको थियो । बैठकमा सन्दिपको नाम आएपछि यो विषयमा धेरै छलफल भएन । कारबाहीमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका बोर्ड मेम्बरहरुले भावी कप्तानमा चासो दिएनन् ।
संघले सन्दिपसँग छलफल गरेर नै उनलाई कप्तानमा अघि सारेको हो । यद्यपि, क्यानको निर्णयबाट खेलाडीहरु भने अचम्भित बनेका छन् । टिममा ज्ञानेन्द्रसहित शरद भेषवाकर, विनोद भण्डारी, सोमपाल कामीजस्ता पुराना खेलाडीहरु छन्, जसलाई सन्दिपको नेतृत्व स्वीकार्न कठिन हुन सक्छ ।
टिममा आउलान् चार खेलाडी ?
क्याले ४ जना खेलाडीसँग २०२२ को पहिलो ६ महिना सेन्ट्रल कन्ट्राक्ट नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसको अर्थ ती खेलाडीले त्यस अवधिमा कुनै पारिश्रमिक पाउने छैनन् । अब प्रश्न उठ्छ, के सेन्ट्रल कन्ट्राक्टमा नसमेटिए पनि ती खेलाडीले राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न सक्छन् ?
राष्ट्रिय टिमबाट खेल्नका लागि क्यानको सेन्ट्रल कन्ट्राक्टमा पर्नुपर्ने वाध्यता हुँदैन । तर, टिमका सिनियर खेलाडीहरु अपमानजनक रुपमा पारिश्रमिकबिना ६ महिना खेल्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न हो । यो खेलाडीहरुले नै निर्णय लिने कुरा हो ।
चार खेलाडीहरुलाई साथ दिँदै टिमका अरु खेलाडीहरुले पनि सामूहिक विद्रोह नगर्लान् भन्न सकिन्न । सामाजिक सञ्जालमा ऐक्यबद्ध भएर ‘आइ एम डन’ लेख्नुले त्यही सम्भावनालाई दर्शाउँछ । यदि त्यसो भएको खण्डमा नेपाली क्रिकेट अर्को संकटमा फस्नेछ ।
क्यानको अदूरदर्शी निर्णय अन्ततः उसैका लागि बोझ बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ क्रिकेट समर्थकहरुको पनि दबाब क्यानलाई पर्यो भने निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प हुँदैन ।
← प्रचण्डपथ छोड्नु माओवादीको गम्भीर गल्ती: जनार्दन शर्मा
महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सभापतिलाई सही ठाउँमा उभ्याउँछौँ भन्दै गर्जिए गगन थापा →